Real Madrid Oo Diyaarinaysa Heshiis Cusub Oo Mushaar Kordhina U samaynaya Cristiano Ronaldo - jornalizem
Real Madrid Oo Diyaarinaysa Heshiis Cusub Oo Mushaar Kordhina U samaynaya Cristiano Ronaldo
Warar ayaa sheegaya in Real Madrid ay u diyaarinayo heshiis cusub inay la saxiixato weeraryahankeeda Cristiano Ronaldo, kaasoo ah heshiis uu ku soo gunaanudayo aayaatiinkiisa ciyaaraha.
Toddobaad kahor ayuu Ronaldo ka dhex shanqariyey gambaleel caasimada dalka Spain ee Real Madrid kadib markii uu sheegay in ay murug ku hayso Santiago Bernabeu.
Balse, wargeyska maalinlaha ah ee Marc ayaa maanta qoray in madaxweyne Florentino Perez uu soo afjari doono wararka ku saabsan weeraryahanka reer Portuguese mustaqbalkiisa isagoo soo hordhigi doono heshiis cusub.
Heshiiska cusub ayaa sida iska cad waxaa loo kordhin doonaa mushaarka Ronaldo,iyadoo wararka qaar ay sheegayeen in mushaarkiisu uu gaari doono €16 million xilli ciyaareedkii.
Sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa waxa ay garab ku siin doontaa weeraryahankeeda sidii uu ku gaari lahaa inuu ku guuleysto abaalmarinada caalamiga ah sida Ballon d’Or kaasoo ah arrinwadnaha kaga taal Ronaldo.
Warkan ayaa soo baxay maalin kadib markii ABC uu sheegay in Ronaldo uu ku hanjabay in uuka tagayo kooxda maalintii ugu dambaysay ee suuqa kala iibsiga ciyaaraha waxana uu ciyaaryahanku uu sii raaciyey in koox uusan magacaabin oo lagal yaabo inay tahay PSG ama Anzhi inay u soo bandhigtay lacag dhan €95m, oo ah lacag la mid ah tii ay Real Madrid ka siisay Manchester United saddex sano muddo haatan laga joogo.
Laacibkii hore ee garabka uga ciyaari jirey kooxda Sporting Lisbon ayaa heshiiska uu kula joogo Madrid waxa uu ku eg yahay 2015 waxana uu haatan arrimo ciyaaro caalami ah uu ula joogaa xulka dalkiisa ee Portugal,